Ihe iri ahụ maka ịrụ ọrụ nke ọma, na -emegharị ozi email | Martech Zone
Wenezde, August 11, 2021 Wenezde, August 11, 2021 Douglas Karr
Ọ bụ ezie na email enweela ntakịrị n'ime iri afọ ole na ole gara aga na HTML, ime ihe na -anabata ihe, na ụfọdụ ihe ndị ọzọ, ike na -akwalite email dị irè ka bụ idetuo ozi na ị na -ede. Ọ na-ewutekarị m na ozi ịntanetị m na-enweta n'aka ụlọ ọrụ ebe amaghị m onye ha bụ, ihe kpatara ha jiri zitere m ozi, ma ọ bụ ihe ha tụrụ anya ka m mee ọzọ… maka ha.
Mụ na onye ahịa na -arụkọ ọrụ ugbu a ịdepụta nnomi maka ọtụtụ ozi ịntanetị ha na -akpaghị aka. na ekpugherela m nuances zuru ezu maka akụkọ ndị ọzọ na -asọrịta mpi ịkekọrịta echiche m na nchọpụta m ebe a.
Onye ahịa m ejirila ndidi chere m ka m rụchaa ọrụ a… na -eche na m ga -emepe akwụkwọ okwu, dee akwụkwọ nke ha, ma nye ya ndị otu mmepe ha ka ha tinye n'ime ikpo okwu ha. Nke ahụ emeghị n'ihi na ihe ọ bụla ga-enwerịrị echiche nke ọma yana ọ chọrọ nnukwu nyocha. Ndị debanyere aha anaghị enwe ndidi n'oge a maka ụlọ ọrụ ndị na -egbu oge ha site n'ịkwalite nkwukọrịta na -abaghị uru. Achọrọ m ijide n'aka na usoro anyị maka ozi ịntanetị ndị a na-agbanwe agbanwe, na-eche echiche nke ọma, ma buru ụzọ mee ya nke ọma.
Akụkụ akụkụ: Agaghị m ekwu maka nhazi, imewe, ma ọ bụ njikarịcha ebe a…
Ihe ndeputa email dị irè
Enwere isi ihe iri amatala maka ide nnomi email dị irè. Rịba ama na ụfọdụ n'ime ha bụ nhọrọ, mana iwu ahụ ka dị oke mkpa ka onye debanyere aha email na -agagharị na email. Achọrọ m iweda ogologo nke email ahụ. Email kwesịrị ịdị ogologo oge achọrọ iji ruo ebumnuche nke nkwukọrịta… Nke ahụ pụtara na ọ bụrụ nrụgharị paswọọdụ, onye ọrụ chọrọ ịma ihe ọ ga -eme yana otu esi eme ya. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ọ bụ akụkọ na -atọ ụtọ, puku kwuru puku okwu nwere ike bụrụ ihe dabara adaba ịnabata onye debanyere aha gị. Ndị debanyere aha anaghị enwe mmasị ịpịgharịa ma ọ bụrụhaala na edere ozi nke ọma ma kewaa ya maka nyocha na ịgụ.
Nweta Isiokwu - Usoro isiokwu gị bụ akụkụ kachasị mkpa mgbe ị na -ekpebi ma onye debanyere aha ga -emepe email gị. Ndụmọdụ ụfọdụ maka ide ahịrị isiokwu dị irè:
Ọ bụrụ na email gị bụ nzaghachi akpaghị aka (mbupu, paswọọdụ, wdg), kwuo ya naanị. Ọmụmaatụ: Arịrịọ nrụpụta paswọọdụ gị maka [ikpo okwu].
Ọ bụrụ na email gị na -enye ozi, jụọ ajụjụ, gụnye ihu ihu, tinye ihe ọchị, ma ọ bụ gbakwunye emoji na -adọrọ uche gaa na email. Ọmụmaatụ: Kedu ihe kpatara 85% nke ọrụ mgbanwe dijitalụ ji ada?
Onye isi mmalite - ọtụtụ sistemụ na ụlọ ọrụ anaghị echebara echiche maka ederede ederede. Nke a bụ ederede ederede nke ndị ahịa email na -egosipụta n'okpuru ahịrị isiokwu gị. Ha na -abụkarị ahịrị ole na ole mbụ nke ọdịnaya dị na email, mana na HTML na CSS ị nwere ike hazie ederede mbido ma zoo ya n'ime ahụ email ahụ. Onye na -ebute ụzọ na -enyere gị aka ịgbasa n'ahịrị isiokwu gị wee jide uche ndị na -agụ ya, na -adọta ha ka ha gụọ ozi email niile. Eg. N'ịga n'ihu n'ahịrị mgbanwe mgbanwe dijitalụ dị n'elu, onye isi mmalite m nwere ike ịbụ, Nchọpụta enyela ihe 3 ndị a na -esote ihe kpatara mgbanwe mgbanwe dijitalụ ji ada n'ime ụlọ ọrụ.
Oghere - Paragraf mmeghe gị nwere ike ịbụ onye isi mmalite gị ma ọ bụ nwee ike iji ohere ọzọ gbakwunye ekele, kelee ụda nke ọma wee guzobe ebumnuche nkwukọrịta. Ọmụmaatụ: N'edemede a, anyị ga -ekerịta nyocha zuru oke emere n'ime ụlọ ọrụ Fortune 500 nke na -arụtụ aka na 3 ihe kpatara ọrụ mgbanwe dijitalụ ji ada n'ime ụlọ ọrụ ahụ.
Obi ekele (nhọrọ) - Ozugbo i setịpụrụ ụda, ị nwere ike chọọ ikele onye na -agụ ya. Ọmụmaatụ: Dị ka onye ahịa, anyị kwenyere na ọ dị oke mkpa ịkekọrịta ozi dị ka nke a iji bulie uru anyị wetara na mmekọrịta anyị. Daalụ maka nkwado gị na [ụlọ ọrụ].
Isi - Sọpụrụ oge ndị mmadụ site na ịnye mkpụmkpụ na ihe okike iji ruo ebumnuche ị kwuru n'elu. Nke a bụ ndụmọdụ ole na ole…
Tinye n'ọrụ nhazi na -eji nwayọ na nke ọma. Ndị mmadụ na -agụ ọtụtụ ozi ịntanetị na ngwaọrụ mkpanaka. Ha nwere ike chọọ ịbugharị site na email wee gụọ isi akụkọ, wee gwuo ala n'ime ọdịnaya ahụ. Isi akụkọ dị mfe, okwu ndị nwere nkwuwa okwu, na isi okwu ga -ezu iji nyere ha aka inyocha ma lekwasị anya na nomi ha masịrị ya.
Tinye n'ọrụ ndịna na -eji nwayọ na nke ọma. Ihe onyonyo na -enyere ndị debanyere aha aka ịghọta ma chekwa ozi ị na -enye Ọsọ ọsọ karịa ịgụ ederede. Chee echiche maka ilele chaatị achịcha karịa ịgụ isi ihe na ụkpụrụ… chaatị a na -arụ ọrụ nke ọma. Eserese ekwesịghị ịbụ ihe ndọpụ uche, ma ọ bụ enweghị afọ ojuju. Anyị achọghị igbu oge ndị na -agụ ya.
Omume ma ọ bụ Nye (nhọrọ) - Gwa onye ọrụ ihe ọ ga -eme, ihe kpatara ị ga -eji mee ya, na mgbe ọ ga -eme ya. Aga m akwado nke ukwuu ka ị jiri ụdị bọtịnụ nwere iwu dị na ya. Ọmụmaatụ: Ọ bụrụ na ị na -eme atụmatụ mgbanwe mgbanwe dijitalụ gị na -esote, hazie nzukọ ndụmọdụ mmeghe n'efu ugbu a. [Bọtịnụ nhazi oge]
nzaghachi (nhọrọ) - Rịọ ma nye ụzọ iji nye nzaghachi. Ndị debanyere aha gị nwere ekele maka ịge ntị yana enwere ike nwee ohere azụmaahịa mgbe ị rịọrọ nzaghachi ha. Ọmụmaatụ: Ị hụrụ ozi a bara uru? Enwere isi okwu ọzọ ị ga -achọ ka anyị nyocha ma nye ozi gbasara ya? Zaghachi email a wee mee ka anyị mara!
Resources (nhọrọ) - nye ozi ọzọ ma ọ bụ ozi ọzọ na -akwado nkwukọrịta. Ozi a kwesịrị ịdị mkpa na ebumnuche nkwukọrịta. N'okwu a dị n'elu, ọ nwere ike bụrụ mgbakwunye blọọgụ dị mkpa nke ị megoro, akụkọ ole na ole gbasara isiokwu ahụ, ma ọ bụ ezigbo akụrụngwa edepụtara na isiokwu ahụ.
jikọọ - Nye ụzọ nkwukọrịta (web, social, address, phone, etc.). Mee ka ndị mmadụ mara ebe na otu ha ga -esi jikọọ gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị na mgbasa ozi mgbasa ozi, blọgụ gị, akara ekwentị gị, ma ọ bụ ọbụlagodi ebe anụ ahụ gị dị.
Ncheta -Gwa ndị mmadụ otu ha siri denye aha ha ma nye ha ụzọ ịpụ ma ọ bụ gbanwee mmasị nkwukọrịta gị. Ọ ga -eju gị anya na ọtụtụ ozi ịntanetị na -ahọrọ n'ime, yabụ chetara ha ka etinyere ha na listi email gị! Ọmụmaatụ: Dịka onye ahịa anyị, etinyere gị n'ime akwụkwọ akụkọ ndị a. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịpụ apụ ma ọ bụ melite mmasị nkwukọrịta gị, pịa ebe a.
Ndakọrịta bụ isi na nhazi email gị yana idetuo, yabụ tọọ ntọala maka ozi ịntanetị gị ọ bụla ka ndị debanyere aha wee mata ma nwee ekele maka nke ọ bụla. Mgbe ị setịpụrụ atụmanya na ọbụna karịa ha, ndị debanyere aha gị ga -emepe, pịa, mee ihe karịa. Nke a ga -eduga n'ịkwalite mmekọrịta dị mma, inweta na ijigide ndị ahịa gị.
Tags: emailemail ahụịkpọ oku ka ime iheemail oyiriidegharị emailemail ctantinye aka na emailemail n'okpurunhazi emaileserese emailnkụnye eji isi mee emailemail Marketingimeghe emailnzaghachi emailemail njigideekele emailngalaba emailemail isiokwu akaraonye isi okwu